Dowladda Ruwanda oo balanqaad muhiim ah sameysay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Ruwanda oo balanqaad muhiim ah sameysay
Dowladda Ruwanda oo balanqaad muhiim ah sameysay
Ruwanda(SONNA) Xukuumadda Kigaali ee Rwanda ayaa waxaa ay sheegtay in ay ku yaboohday in ay magangalyo siinayso 30,000 oo muhaajiriin Afrikaan ah oo ku go’doonsan dalka Liibiya, kuwaas oo badankood ku sugan xaalad adoonsi ah.
Talaabadan oo ay ku dhaqaaqday Dowladda Ruwanda ayaa ka dambeysay kadib markii TVGA CNN uu baahiyaya muqaalo muujinaya dad badan oo Afrikaan ah kuwaasi oo qaab aduunsi ahaan looga xaraashayay Dalka Liibiya si beeraha loogu fasho.
War ka so baxay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Dalka Ruwanda ayaa lagu yiri “Taariikhdanada markaan fiirino, kama aamusi karno iyadoo bani’aadan si xun loola dhaqmayo, loona xaraashayo sida lo’da oo kale” ayaalagu yiri qoraalkaasi.
Boqolaal kun oo Afrikaan ah ayaa Liibiya u safra sanad walba, iyaga oo isku dayaya in ay qaaradda Yurub u tallaabaan,waxaana Badanaa qabsada dadka wax tahriibiya, waxaana lagu qasbaa in ay shaqeeyaan iyaga oo lacag yar la siiyo ama bilaash ku shaqeeya.
Dalka Ruwanda ayaa markii uu socday xasuuqii ba’naa ee 1994tii, dad lagu qiyaasay 800,000 oo ah qawmiyadda Tutsi-ga iyo Hutu-gii qunyar socodka ahaa lagu xasuuqay 100 maalmood gudahood, markaas oo dalalka badankood aysan wax badan u qabanin.
Dowladda Ruwanda ayaa iyado oo fiirinaysaa taariikhdaasi waxaa ay damqasho u muujinaysaa dadkaasi afrikaanka ah oo lagu dhibaataynayo Dalka Liibiya.
Previous articleShirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa-Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay Heshiiska Xaquuqda Carruurta iyo arrimo kale.
Next articleR/wasaare Khayre”Dhismaha Xabsiga Dhexe ee Baydhabo waa qeyb kamid ah qorshe horumarinta Cadaaladad iyo Amniga